Ndi oru egwu 11, ndi ndu ha gbanwere ruo mgbe ebighi ebi n'oru ihe nkiri
Na-ekiri ihe nkiri na-esonụ, mmadụ ole na ole na-eche echiche banyere akụkọ banyere ihe o kere, na otú ndị na-eme ihe nkiri si merie ọrụ ha. Na kpakpando ụfọdụ, ndụ agbanweela mgbe ọ na-arụ ọrụ na sinima.
Ndụ nke ndị Hollywood kpakpando dị mfe na onye na-enweghị ncheta, ma ọ dị anya na ikpe ahụ. Ọ gaghị adị mfe itinye aka na nke a ma ọ bụ ọrụ ahụ, ma e nwere oge mgbe egwuregwu ahụ na-etinye nnọọ aka na ndụ dum gbanwere n'ụzọ dị irè. Enwere ike ịhụ nke a site n'ịhụ ezigbo ihe atụ nke ndị na-eme ihe ngosi.
1. Isabel Adjani - "Echere"
Karịsịa, ihe nkiri egwu na-emetụta ndị mmadụ, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike iwetara foto a na 1981. Iji kpọọ Anna, onye omempụ ahụ aghaghị itinye ọtụtụ mgbalị na nke mmetụta uche, nke metụrụ ọnọdụ ya aka ọjọọ. Ajani n'ajụjụ a kwuru na mgbe agbapụ ahụ dị ogologo oge mere ka ọ bụrụ ụzọ ndụ zuru oke, ọ ghaghị iji ọtụtụ afọ mee ihe banyere ọgwụgwọ na mgbake nke ọnọdụ uche ya. Na mgbakwunye, o kwetara na ya agakwaghị enyocha maka ọrụ na fim ndị a.
2. Tom Cruise - "N'elu anya mechiri"
Mgbe a gwara otu ndị hụrụ Tom Cruise na Nicole Kidman ka ha kpọọ ihe nkiri nke ọkà mmụta bụ Stanley Kubrick, ha nwere obi ụtọ na ha na-arụ ọrụ ọnụ. Ịme ihe nkiri dịgidere ihe karịrị otu afọ, n'ihi na n'ọmụmụ ihe ọ bụla, onye nhazi ahụ mere ka ọ bụrụ obere ihe. Ihe a niile mere ka ndị enyi malitere ịlụ ọgụ mgbe niile, n'ihi ya, alụmdi na nwunye ha dara.
Iji kwadebe maka ọrụ ọhụrụ, onye omee ahụ aghaghị ime ihe siri ike: kpoo isi ya ma nọdụ na nri siri ike iji belata. O kwetara na égbè ahụ bụ ezigbo ule, n'ihi na o nweghị ike. N'ihi ike gwụrụ nke anụ ahụ na nke mmetụta uche, kpakpando ahụ enweghi nkwukọrịta na eziokwu n'oge ọrụ, nke na-emetụta mmetụta uche ya n'ụzọ na-ezighị ezi. Ann kwuru na mgbe eserese ruo ogologo oge enweghị ike ịzaghachi ihe omume gburugburu.
4. Hugh Laurie - "Ụlọ Dọkịta"
Ebube dị ebube nke onye omeebe Britain mere ka ọ bụrụ dọkịta na-adịghị mma, otu n'ime ihe ndị dị na ya bụ ihe na-adịghị mma. Ọ ghaghị igosi na ọ kwụsịrị maka afọ asatọ (ọtụtụ ntụrụndụ na-adịgide adịgide), nke metụtara ahụike ya, n'ihi ya, o nwere ihe mgbu na ikpere ya. N'ihi ya, Laurie nwere ike ịdaba na ndụ nkịtị. Iji mee ka ahụ dị ya mma, mgbe ụfọdụ, ọ gbanwere ụkwụ ya, nke na-eme ka ọ ghara ịmalite, ma o nyeghị aka.
5. Heath Ledger - "The Knight Dark"
Ihe ndị na-ekiri egwu na ndị nkatọ na-egosi ọrụ a na-enweghị atụ na ọrụ nke Joker, bụ nke e nyere ya onyinye Oscar. Ihe a na-akwanyere onye omee ahụ ùgwù enweghị ike ijide n'aka ya, ebe a na-enye ya mgbe ọ gasịrị. Ledger nwụrụ n'ihi ịṅụbiga mmanya ókè. Ọtụtụ ndị maara na ọ bụ egwuregwu na fim ahụ "The Dark Knight" nke kpatara ihe niile ụta. Iji kwadebe maka ọrụ na ịghọtakwu ụwa nke ndị nzuzu, Kpoo tupu Ome ahụ anọpụ iche, debe akwụkwọ edetụ ma banye n'ọnọdụ ọhụrụ maka ya. N'ihi ya, ịda mbà n'obi na ehighị ụra nke ọma bilitere, bụ nke dugara n'iji mpempe akwụkwọ, antidepressants na ọgwụ ike. Ihe na-egbuke egbuke bụ eziokwu ahụ bụ na ntinye ikpeazụ n'ime ihe nkiri onye nkiri ahụ bụ okwu ahụ bụ "Bye Bye".
6. Lee Brandon - "Ụgha"
Ogbugbu maka onye nkiri ahụ na-arụ ọrụ n'ime ihe nkiri dị egwu. Na otu ihe, a ga-agbapụ ya kaadị ọkụ, ma, site na mgbagha, bọmbụ ahụ na-alụ agha, Brandon nwụkwara ozugbo na ọdịda. Eziokwu na-adọrọ mmasị - omee ahụ enweghị ike ime ihe n'otu ọnọdụ, mgbe ọ dara mgbe ọ nwụrụ site n'ịdị elu. N'ime ya, onye omeewu ọzọ na-ese foto, ihu Brandon Lee "na-etinye" ihu ya n'oge nhazi ya. Mgbe ihe a dị egwu gasịrị, a na-eji usoro nhazi a mee ihe na fim ndị ọzọ iji "kpọte" ndị omempụ nwụrụ anwụ.
7. Keanu Reeves - Ihe Omume
Otu n'ime ihe nkiri ndị a kasị mara amara, ọtụtụ ọdachi na-ejikọta ya, ya mere, e mepụtara echiche dịka "nkọcha nke Matrix". Dịka ọmụmaatụ, amụrụ nwa enyi Reeves nwa, wee nwụọ. Onye omekorita ahụ, nke a kwadoro maka ọrụ Zi, gafere, ya mere agbapụ agbapụ maka ọnwa ole na ole. E nwere ọnọdụ nke na Keanu n'onwe ya fọrọ nke nta ka ọ nwụọ, na-etigharị na ọgba tum tum. Onye omere ahụ kwetara na "nkọcha nke Matrix" ahụ raara ya ụba ogologo oge. Ke adianade do, mgbe a na-ese ihe nkiri nke abụọ nke ihe nkiri ahụ, Kianu ghọrọ onye Buddha kwenyesiri ike, n'ihi ya, a manyere ya na saịtị ahụ iji gụọ mantra ma na-esure ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ iji chebe onye ọ bụla pụọ ​​na nhụsianya. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọtụtụ ndị malitere ile Rivza dị ka "nwa atụrụ".
8. Shelley Duval - "Ihe na-egbuke egbuke"
Mgbe ọ na-ese foto nke otu n'ime ihe nkiri kachasị egwu nke oge nile, Shelley ghaara ezigbo ule. Dịka ọmụmaatụ, na ebe a ma ama na batrị baseball, a naghị eme mkpọtụ nke onye na-eme ihe nkiri ahụ, ma ọ bụ nhụjuanya nke ụjọ, ebe ọ bụ na onye nhazi fim ahụ mere ka nwa agbọghọ ahụ gbanwee usoro ahụ ọtụtụ ugboro, nke mere ka ọ daa mbà. N'ajụjụ ọnụ ahụ, ọ gwara m na agbapụ ahụ were ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ, na ihe dị ka ọnwa itoolu, ọ ghaghị iti mkpu ruo awa 12 n'ụbọchị. N'ihi ya, mgbe Shelley nyesịrị égbè ọtụtụ afọ, ọ na-arịa ọrịa uche.
9. Johnny Depp - "Egwu na Ịkpọasị na Las Vegas"
Mgbe omee ahụ natara ọrụ onye edemede na odeakụkọ bụ Hunter Thompson, o kpebiri iji nlezianya nyochaa ndụ ya na àgwà ya, ya mere, ọ kwagara n'ala. Ihe egwuregwu a na-atụghị anya ya bụ Depp bụ ihe doro anya na ndị ọrụ ahụ jụrụ ma ọ bụ na-achịkwa "acid". Mgbe o kwusịrị ọrụ ahụ, Johnny ruo ogologo oge enweghị ike iwepụ àgwà ya, ọ bụ enyi ya na Thompson tupu ya egbuo onwe ya. Ịhụ maka ịṅụbiga mmanya ókè na ọnọdụ uche na-adịghị agbanwe agbanwe emeela ọtụtụ nsogbu ná ndụ onye omeewu mara mma.
10. Adrian Brody - "Pianist"
Onye omero ahụ setịpụrụ ihe mgbaru ọsọ - iji rụọ ọrụ kachasị elu, ya mere o kpebiri ịhapụ ihe nile (rere ụgbọ ala ahụ, gbanyụọ, gbanyụọ ekwentị) ma hapụ nwa agbọghọ ahụ, n'ihi na n'ụzọ ọzọ, ọ gaghị eche na ọ ga-adị ka ihe niile funahụrụ ya. Tụkwasị na nke ahụ, ọ jụrụ izu ole na ole site na iri. Ọ gwara ndị nta akụkọ na mgbe agbapụ ahụ gasịrị, ọ dara mbà n'obi ruo ogologo oge ma nwee obi abụọ ma ọ ga-enwe ike ịlaghachi ndụ nkịtị ma ọ bụrụ na ọ dịghị arahụ. Iji nwetaghachi, Brody were otu afọ na ọkara.
11. Janet Lee - "Obi ebere"
Ekele Alfred Hitchcock nwere mgbagwoju anya, uwa hụrụ otu ihe nkiri nzuzo nke e gosipụtara akparamagwa nke onye ogbu mmadu. Maka onye omeebe ahụ, onye na-ekere òkè dị ka onye aja, agbapụ bụ ule. Dịka ọmụmaatụ, ebe a na-egbu heroine na ịsa ahụ, na-eme ka ọnụọgụ buru ibu, gbagburu otu izu. N'ajụjụ ọnụ ya, Li kwupụtara na ya na-atụ egwu ịsa ahụ maka ogologo oge mgbe ọ na-arụ ọrụ na Psycho, n'ihi ya, ọ na-emeghe ákwà mgbochi ma na-ele anya n'ọnụ ụzọ.
Amber Hurd na-etinye oge na Vito Schnabel
Onye na-eme ihe nkiri Johnny Depp gbalịrị ịkpasu ọgụ na setịpụrụ ihe nkiri ahụ bụ "Labyrinth"
Ndị nche nke Johnny Depp gbara ya ume
Akụkọ ndị a na-egosi na ndụ ndị na-eme ihe nkiri adịghị mma ma na-achọ ọtụtụ ndị metụtara, na mgbe ụfọdụ ọbụna ndụ.
73 amaghi ihe banyere ndi amara na i maghi
Ndị 30 ndị nwere obi ike na-agbanwe ihe ngebichi na ihuenyo
Ha na-achọ ụwa anyị mma: ụmụ nwanyị 10 kachasị mma nke inyom
10 ụmụ nwanyị, mara mma ma na nwanyi na onyinyo nwoke
"Agaghị m ewepu ma ọlị!" - onye na-agba egwú nke nwere oke ogwu na ihu ya jụrụ ịwa ahụ
Ihe nzuzo ndị na-emenye ihere: kpakpando 29, na-eme ihe ike ime ihe ike
Eziokwu banyere ihe gbasara eziokwu gbasara Ronaldo, bụ Georgina Rodriguez, hụrụ n'anya
Ọnụ ọgụgụ zuru ezu: ndị na-eme ihe nkiri na nkwado ndabere ha na setịpụrụ
Ihe niile ezoro anyị: nkọwa gbasara agbamakwụkwọ eze
Top 13 kasị mara mma ndị amoosu na akụkọ ihe mere eme nke sirima
Kedu ka esi kpochapu pan si na nkwụnye ego?
Anya nke Kirov
Agba agba na ntutu isi
Na-akpụzi na windo plastik
Mpempe akwụkwọ Ọhụụ
Ịhịa aka na nkume
Uwe a na-akwa iko 2013
Gainer - oriri na-edozi ahụ
Kedu esi ehichapu ihe eji eme ihe na obe?
Mmega ahụ iji mee ka uru ahụ dị n'azụ laghachi
Onyinye maka nwoke ruo afọ 50
Omenala nke Barbados
Ụzọ Ejiji 2014
Ntozi maka ụmụ amụrụ ọhụrụ
Echiche maka oge ịse foto nke ụmụ agbọghọ
Mastitis na nne nọọsụ - ihe ịrịba ama
Kedu ịdọ aka ná ntị banyere ahụ gị ma ọ bụrụ na ị eteta n'abalị n'abalị ahụ?
Foto di omimi nke Vladimir Putin na umu anumanu